Mobilenomics: Raha tsy finday ianao dia tsy mivarotra | Martech Zone
Mahatsiaro ho tsara izahay mahita ny fironana teknolojia ho avy ary avy eo mampahafantatra anao mialoha. Efa niresaka momba ny fitomboan'ny finday efa herintaona mahery izao, saingy talanjona izahay rehefa nanao fanaraha-maso fanatsarana ho an'ny mpanjifa vao tsy ela akory izahay ary tsy nanana tetikady finday… tsy nisy. Tsy finday ny tranonkalany, tsy nohamarinina ho an'ny finday ny mailaka, ary tsy nisy fampiharana finday teny amin'ny faravodilanitra… nada.
Indraindray mila video iray hahazoana fomba fijery tsara momba ny zavatra ary Erik Qualman dia miasa tsara amin'ny fametrahana ny statistikan'ny fananganana finday amin'ny fomba fijery. Ny tena izy dia… raha tsy finday ianao dia tsy marketing.
Rant: Handrava ny varotra Internet ny governemanta amerikana
Mar 26, 2013 amin'ny 4: 41 AM
Mijanona eto ny marketing amin'ny finday, tsy misy isalasalana izany. Ireo orinasa izay tsy mandinika izany dia hiatrika olana betsaka amin'ny asan'ny taranaka mitarika azy ireo. Tokony ho azonao antoka fa ho solontenan'ny marika ny pejinao, na inona na inona fitaovana ampiasaina hidirana amin'izy ireo.